Deeq Aaryo Oo Dib U Furtay Koontadiisa Goolasha Ee Kooxda Banaadir %
Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Banadir Sports Club Deeq Cabdulaahi Nuur (Aaryo) ayaa shaley dhaliyay goolkiise ugu horeyay kooxda Banadir Sports Club kulan ay kooxdiisa bar baro la gashay Naadiga Batroolka, kaa uu qeyb ka ahaa horyaalka Somali Premier League.
Xidigan dhawaangalka ee Kooxda Banadir Deeq Aaryo ayaa kal hore kasoo tagay Kooxda Ciidanka Booliska ee Heegan, xilli uu waqti fiican lasoo qaatay Kooxdiisii hore ee Heegan.
Tani iyo Markii uu ku soo biiray kooxda Banadir Laacibka kasoo jeeda Magaalo Xeebeedka Kismaayo ee Deeq Cabdulaahi Nuur (Aaryo) ayaa kasoo muuqday kaliya 3- kulan kuwaas uu badal ku yimid.
Deeq Aaryo ayaa lagu tiriya xidigaha ku wanaagsan dhanka weerarka, hase ahaatee Nasiib daro, goolkii uu shalay ka dhaliyay Kooxda Batroolka ayaase noqon mid ay ku faa,iiday Kooxdiisa, xilli laga dhaliyay goolkii barbaraha daqiiqadii ugu danbeeyay ee dheesha.
Si kastaba ha ahaatee’ Cayaariyahan Deeq Cabdulaahi Nuur (Aaryo) oo 28-sano jir ah ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in helo goolkiisii ugu horeeyay ee xagaagan, gaar ahaan Kooxda Banaadir, xilli la xasuusto in uu qayb kahaa Xiddigihii Macalin Gadaaow kula guulaystay Horyaalkii 2014/2015, balse maanta wata shaarka Kooxda Banaadir.